Card A xasuusta kharribeen waa mid ka mid ah sababa ugu ma ogola in loo akhriyo ama loo qoro xogta in gal kaydinta. Inta badan sabab la xiriira Baadi aadanaha iyo in la hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin sababaha habboon ee musuqmaasuqa la akhriyo waa in oo la fahamsan yahay inay aad u hesho natiijooyinka ugu fiican.
Waxaa jira tobanaan kun oo sababaha taas oo keeni in arrinta sakhiray iyo sabab la mid ah, waa mid ka mid ah arrimaha ugu foolxun ee jeer oo dhan marka ay timaaddo kaadhka xusuusta gaar ah. Sababaha ugu caamsan oo soo noqnoqda waxaa oo dhan ay sababtay qalad u user ee isticmaalaya kaarka habka ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee waxaa jiri kara sababo kale iyo sidoo kale qaar ka mid ah ayaa lagu qoran sida hoos si user ah ka heli kartaa aragti cad oo ku sinnaariyooyinka taas oo keeni karta in storages kharribeen iyo arrimaha la xiriira iyaga,
1. Marka kaarka xasuusta labaad oo la geliyo akhristaha aan ka saareen mid ka mid ah hore waa ma aha oo kaliya oo kharribanta kaarka laakiin sidoo kale in la hubiyo in khasaaro xogta dhacdaa.
2. Marka baytariyada qalabka ku saabsan in lagaga miiro waxaa lagula taliyay in aysan u isticmaal sida khasaaro xogta ay dhici karaan iyaga oo aan hoos oo shaki ku jira.
3. Marka kaarka waxaa ka buuxa waxaa lagula talinayaa in ay u gudbiyaan content in ay kaydinta aamin ah si ay xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira iyo user marnaba helo kaarka buuxa xasuusta hallaysay badan xogta gudaha.
4. kaadhka xusuusta ee lagu isticmaalay aan formatting sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee khasaaraha xogta arrintan la xiriira ka.
5. kaadhka xusuusta waa in aan la qabsado oo la geliyo waqtigii sida ay sababaa lumis xogta iyo gaadhista joogtada ah ee aan deegaanka ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu kaydiyo si joogta gab.
6. Waa in batteriga ayaa si buuxda loogu soo oogay ka hor xogta la wareejiyo ama ka kaadhka xusuusta sida baytariyada hoos u hubiyo in khasaaro xogta ku dhacdaa inta badan kiisaska sameeyo.
Sida loo soo ceshano sawiro ku saabsan kaadhka xusuusta kharribeen
Kaararka xusuusta kharribeen yihiin madax u user iyo sabab la mid ah barnaamijka ugu wanaagsan waa in la isticmaalaa sida le ah si loo hubiyo in arrinta la xalin. Mar kale mahad Wondershare horumarinta gobolka ee barnaamijka fanka in la og yahay sida ay Wondershare Photo Recovery taas oo ka dhigaysa hubiyo in photos waxaa soo kabsaday oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada taageerada software farshaxan iyo sidoo. Barnaamijku wuxuu keliya ma aha waxa ay taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee files sawirka laakiin waxa ay sidoo kale ka dhigaysa hubiyo in dhammaan kamaradaha ayaa sidoo kale taageeray. Ma jiro saaraha hal camera ah taas oo aan la taageeray by barnaamijka taasoo muujinaysa sida ay tayada iyo fasalka. Wax soo saarka ayaa ku soo beegmay iyada oo 30 maalin lacag damaanad ah dib oo ay tahay kalsoonida saaraha taas oo muujisay in arrintan la xiriira. Wondershare Photo Recovery Waa waa in uu leeyahay waayo, dhammaan dadka isticmaala kuwa si ​​joogta ah u lumiso sawiro ay sabab u tahay kaararka xun iyo ku takrifal.
Geedi socodka la xidhiidha in la isticmaalo Wondershare Photo Recovery ayaa xusay sida soo socota:
1. user wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan URL http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html si loo hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo bilaabay marka uu ku rakiban:
2. Marka button bilowga la riixi user ay u baahan tahay si aad u hubiso in bogga xiga drive la soo xulay in ay tahay in la marsiiyey u kaqabashada sawirka:
3. Marka drive la soo xulay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhanka Scan la isku soo riixayo oo dhan photos soo kabsaday ka dibna muujiyeen ka dib markii sawirka la dhamaystiro.
4. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in ay sawiro in ay tahay in la soo kabsaday ayaa la riixi ama hubiyaa iyo badhanka soo kabsado dhufto si aad u dhamayso ee buuxa.
Qaabab file Image taageerayaan
Ka dib waa qaabab in waxaa taageera Wondershare Photo Recovery ah:
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PSD, WMF, CR2, DNG, RAF, ERF, cayriin, NEF, saxda
AVI, Jabbuuti, Mpg, dhexena, wmv, MOV, 3GP, ASF, MP4, M4V, FLV
MP3, regelingen, WMA, OGG, AAC, AIF (AIFF), M4A, bartamihii (MIDI)
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka kaarka xasuusta kharribeen
Kaararka xusuusta kharribeen waxaa keeni kara tiro ka mid ah sababaha iyo sabab la mid ah baahida loo qabo in Saacadda waa in la hubiyo in software ugu fiican ee jira si ay u taageeraan user ee xilliyada adag. Wondershare Data Recovery waa hal barnaamij oo kale taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo xogta soo kabsaday oo aan marnaba la helo dhibaato. Barnaamijku waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican sida nidaamyada oo dhan file ayaa sidoo kale taageeray waxaa ay hab ugu fiican iyo sabab la mid ah waxa ay heer sare waxaa lagu talinayaa. Dib u eegidda ee isticmaala iyo macaamiisha Wondershare Data Recovery ee aadka u wanaagsan iyo waxa ay sidoo kale la Timaadda version tijaabo ah. Version maxkamad Tani waxay hubineysaa in go'aanka wax iibsiga ee user waxaa u saamaysay oo mar user helo si loo eego sifooyinka laga cabsado iibka waxaa hubaal ka dhigay. Wondershare Data Recovery Waa yaab in ay tahay in lagu xiro in laga takhaluso arrimaha soo kabashada xogta caadi dhakhso.
Ka dib waa habka ah in la raaco si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta barnaamijkan
1. URL The in la browsed waa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html si loo hubiyo in user helo barnaamijka soo bixi, rakibay oo bilaabay:
2. Nooca file in ay tahay in la soo kabsaday markaas waa in la soo xulay oo ay tahay in la xuso in haddii nooca faylka aan markaas xaqiijiyay Dhammaan Noocyada File waa in la soo xulay:
3. Meesha qasaaraha file ka dhacay waa ka dibna in la cayimay mid kastaba:
4. Marka nidaamka dhameystiray dhan files soo kabsaday ayaa la soo bandhigi doonaa user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in kuwa loo baahan yahay inta badan waa la hubiyaa iyo kabsado button ee koonaha midig ka dibna la sii adkeeyey si loo soo afjaro ad habka soo kabsado dhammaan faylasha ah:
Talooyinka qamaar kaararka xusuusta in aan shaqayn
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah talooyin ay u oggolaan lahaayeen user ay u ilaaliyaan oo u hesho kaararka in ay ka shaqeeyaan haddii ay ka maqnaa si:
1. Kaadhka waa in had iyo jeer la formatted gudahood qalabka kaas oo lagu isticmaalayo oo waa in aan marnaba la formatted isticmaalaya computer ah.
2. Kaarka waa in la geliyo waxqabadka sare akhristaha kaarka sida mararka qaarkood akhristayaasha liita sidoo kale keeni arrinta arrintan la xiriira.
3. hab sawir ka dillaaciyay waa in la sameeyaa oo keliya xaaladaha khatarta ah oo u oggolaan doonaa user si aad u hesho meel bannaan oo dheeraad ah si shuqulladiisu kaarka.
4. kaararka waxaa ka buuxa waa in aan marnaba loo isticmaalin in lagu daro iyo tirtirto tiirarkii halkii xogta waa in marka hore la wareejiyo in arrinta la xalin.
> Resource > Memory Card > siyaabo inuu ka soo kabsado xogta ka kaarka xasuusta kharribeen